အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း မဟာရာရှ်ထရာပြည်နယ် ၌ မိုးနှင့်ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပွားသည့် သဘာဝဘေးကြောင့် လူ ၁၃၆ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘီဟာပြည်နယ်၏ အရှေ့ပိုင်း Muzzaffarpur ခရိုင်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများကြားမှ လူများ ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua)
မွမ်ဘိုင်း၊ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း မဟာရာရှ်ထရာပြည်နယ်၌ ပြီးခဲ့သည့် ၄၈ နာရီအတွင်း မိုးနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဖြစ်ရပ်များကြောင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၁၃၆ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရက ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Raigad ခရိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အနောက်ပိုင်း Satara ခရိုင်တို့တွင် လူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်အတူ မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့် မြေပြိုခြင်း နှင့် မြေနိမ့်ပိုင်းဒေသများ၌ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
လူပေါင်း ၃,၉၀၀ ကျော်အား ကယ်တင်ခဲ့သလို လူဦးရေ ၂,၀၀၀ ခန့်မှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ နေထိုင်နေရကြောင်း၊ ယင်းပြည်နယ်၌ သဘာဝဘေးဖြစ်စဉ်များကြောင့် လူ ၅၅ ဦး ပျောက်ဆုံးနေပြီး၊ အခြားသူ ၇၀ ဦးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Raigad ခရိုင်၌ လူအများအပြားသည် အပျက်အစီးများ အောက်တွင် ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယရေတပ်ကလည်း အမျိုးသားဘေးအန္တရာယ် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့ (NDRF) အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေကြီးမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ရပ်များတွင် သေဆုံးသွားသူများ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆,၇၁၆ ဒေါ်လာအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မဟာရာရှ်ထရာပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် Uddhav Thackeray က ကြေညာခဲ့သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် အန္တရာယ်ကြုံတွေ့သူများအား သက်သာရာရစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Raigad ခရိုင်၊ Ratnagiri ခရိုင်နှင့် Satara ခရိုင်အပြင် အခြားဒေသများ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် လူသေဆုံးမှု သတင်းများမှာ အလွန်ပင်ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ သမ္မတ Ram Nath Kovind က micro-blogging site တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းပြည်နယ်တွင် ဇူလိုင်လ၌ ပုံမှန်ရွာသွန်းမှု မိုးရေချိန်ထက် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း အထက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၄၀ အတွင်း မိုးအသည်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း မိုးလဝသကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုသည်။ (Xinhua)
136 deaths reported in rain-related incidents in India’s western Maharashtra State
MUMBAI, July 23 (Xinhua) — A total of 136 deaths have been reported in rain related incidents over the past 48 hours in India’s western state of Maharashtra, the state government said Friday.
The incidents happened as heavy rain triggered landslides and flood water inundated low-lying areas, with most of the deaths reported from the coastal district of Raigad and the western district of Satara.
With over 3,900 people evacuated, and around 2,000 people staying in relief camps, the state has also reported 55 missing persons with 70 others injured so far in various incidents. Several people are still being trapped under debris in Raigad district and rescue operations are underway.
The Indian navy, along with several teams of the National Disaster Response Force (NDRF) personnel, has been roped in for rescue operations.
Maharashtra’s Chief Minister Uddhav Thackeray has announced an ex-gratia payment of 6,716 U.S. dollars for the next of kin ofavictim who has died in the flood-related incidents.
Expressing confidence that the rescue operations will bring relief to the victims, Indian President Ram Nath Kovind, onamicro-blogging site, said “The news of casualties due to excessive rainfall in Raigad, Ratnagiri and Satara districts and other areas of Maharashtra is very sad.”
The state has reported its heaviest spell of rain in the month of July for the past 40 years, with rainfall so far above 45 percent of the normal benchmark for the month, according to weather experts. Enditem